Ireo fitaovana ireo dia tsy tokony hanjavona amin'ny tokantrano rehetra
Zava-dehibe ho an'ny ankizy ao an-trano - ny toerana fitehirizana optimum
Isaky ny ankohonana dia misy asa kely kokoa na lehibe kokoa azo atao amin'ny tenanao amin'ny ezaka kely tsy mila manafatra mpanao asa-tanana matihanina. Fa noho izany dia mila fitaovana sasany ho an'ny ankohonana foana ianao.
Ny fitaovana lehibe indrindra ho an'ny ankohonana
Hazavainay kokoa amin'ny lahatsoratra raha tokony ho herinaratra foana izany. Ary raha tena mila manana fitaovana azo eritreretina ao an-trano ny vehivavy na ny lehilahy, satria misy zavatra azo amboarina dia aleontsika avelantsika ho an'ny tsirairay izany.
Fitaovana ao an-trano - © Dan Race / Adobe Stock
Saingy ohatra, amin'ny fanodinam-baravarana kiraro vaovao, fanantonana jiro sy sary na angamba fanoloana sous-raha tsy hiteny afa-tsy vitsivitsy amin'ireo mety ho azo atao - dia mila fitaovana ho an'ny ankohonana ianao indraindray.
Mba hamonjy ny vola lany ho an'ny mpanao asa-tanana, dia tena manararaotra raha toa ka misy tranokala fitaovam-piadiana feno entana miaraka amina karazana fitaovana ilaina ao an-tranonao.
Amin'izany fomba izany, asa kely kokoa izay tsy mitaky fahaiza-manao lehibe dia azonao atao amin'ny fotoana rehetra. Mitahiry vola ianao, mahazo matoky tena rehefa mandeha ary mety hampitombo ny fanamby amin'ny manaraka.
Hammer - Ny marotoa dia ampahany lehibe amin'ny fitaovan'ny fitaovana ao an-trano. Izy io dia azo ampiasaina handroahana haingana ny hoho amin'ny rindrina na hanesorana tabilao amin'ny talantalana.
Screwdriver na biriky - Ireo dia misy amin'ny habe samihafa amin'ny dikanteny slotted na cross. Satria misy habe sy karazana visy tsy tapaka isan-karazany, dia tokony ho azo alaina amina kinova maromaro ny biriky. Raha ilaina miaraka amina plug-in miraikitra.
Screw sy Allen key - Zavatra sy fitaovana marobe no miaraka amina bolt na voanjo hexagonaly manokana. Izany no antony tsy tokony tsy hahitana andiana wrenches sy andiana lakilen'i Allen avy eo amin'ilay faritra.
Dingana na fitsapana voltre - Isaky ny mifanerasera amin'ny tariby na sockets ianao dia tokony hiasa amin'ny tester d'exploitation na voltage.
Fitsipika ahetsiketsika na ny refin'ny kasety - mbola antsoin'ny olona am-pitiavana hoe fitsipika mivalona amin'ny maro. Ho an'ny ankamaroan'ny asa na fanamboarana dia misy zavatra tsy maintsy refesina. Ny takelaka dia ny fenitra ary mora raisina. Ny tombony azo avy amin'ny refin'ny horonam-peo dia ny fahalalahana. Ary mora kokoa ny mitahiry miaraka aminy.
Antsy asa-tanana - Matetika antsoina hoe antsy karipetra. Azo soloina ny lelany ary azo esorina. Ireto antsy ireto dia ilaina, ohatra, hanokatra fonosana na hanapahana tariby sy kasety adhesive.
Haavo fanahy kely - Rehefa mametaka sary na talantalana dia tokony hihaino zoro mahitsy ianao. Ny haavon'ny fanahy dia manome antoka fa tsy mila miantehitra amin'ny fahatsapana fitoviana ianao.
Pliers - Ilaina miverimberina ihany koa ny karazana pliers isan-karazany. Ny fitoeram-pitaovana dia tokony ahitana pliers mitazona, fantsom-by ary famafana mitambatra.
Fitaovana herinaratra - mahasoa sa tsy ilaina?
Ho an'ny fitaovana fototra mahazatra "fitaovana ho an'ny ankohonana", ny fitaovana ampiasaina amin'ny herinaratra dia tsy tena ilaina, fa mety mbola manampy be. Tsy fahita matetika ny fahita ireo fitaovana mahazatra toy ny fandavahana, biriky tsy misy tariby na jigsaw ao anaty tokantrano.
Ireo fitaovana ireo dia afaka manatsara ny asa hatao. Satria ny fametahana ireo visy maro amin'ny talantalana vaovao, ohatra, dia mety mila ezaka be. Na izany aza, ny bateria dia mety tsy maintsy voaloa.
Ilaina ny fandavahana amin'ny fametahana jiro na talantalana amin'ny rindrina. Na izany aza, satria tsy mitranga matetika ny asa toy izany dia tsy misy dikany foana ny mividy fitaovana mifanentana avy hatrany. Azonao atao matetika ny mindrana an'ireto milina ireto amin'ny magazay fivarotana fitaovana na amin'ny namana.
Raha misy ankizy kely ao an-trano dia tena ilaina ny manangona ireo fitaovana amin'ny toerana iray mba tsy ho azon'ireo ankizy kely. Ny ankizy manokana dia tena liana amin'ny fitaovan'ny fitaovana, indrindra raha vaovao aminy. Tsy ilaina intsony ny milaza fa mety hiteraka ratra mafy izany.
Ny vatasarihana na ny komparty amin'ny talantalana azo kitihina dia mety ho toerana fitahirizana. Ny toerana mety indrindra dia tranga mety amin'ny fitaovana. Eto ianao dia afaka manasokajy ny fitaovana rehetra ary manidy azy tsara. Napetraka amin'ny toerana iray araka izany ny fitaovana rehetra ary fantatrao avy hatrany hoe aiza no ahatongavana rehefa misy asa tsy maintsy atao. Ankoatr'izay, manana tombony ianao amin'ny fitaterana mora foana ny fitaovana rehetra amin'ny toerana samihafa.
Rehefa mividy tranga fitaovana vaovao: foana na fenoina?
Rehefa manao fahazoana vaovao ianao dia miatrika ny fanontaniana raha tokony hividy tranga efa misy fitaovana na boatin'entana foana ianao ary hividy ireo fitaovana takiana tsirairay. Ny variant "foana" dia miteny ho azy raha toa ka efa manana fitaovana manokana ianao ary te hividy ampahany fanampiny vitsivitsy fotsiny. Ho fanampin'izay, azonao atao ny mamantatra ny tenanao hoe inona avy ireo fitaovana tokony hisy ao an-trano ary iza amin'ireo no tena tsy ilaina.
Na eo aza izany, ny fividianana tranga misy fitaovana dia tena azo ampiharina. Noho izany, mahazo fitaovana feno feno ianao izay ny fitaovana rehetra amin'ny tranga dia voalamina tsara sy milamina tsara. Ny vidiny dia mazàna ihany koa dia mora kokoa, satria ny tolotra dia matetika misy amin'ny sehatry ny fitaovana feno. Raha te hankafy ny fitaovanao mandritra ny fotoana lava ianao dia tokony hifantoka amin'ny kalitao tsara fa haka euro iray na roa hafa.
Fandroana aroma ho an'ny ankizy
Alika ho biby ho an'ny ankizy
Hiran'ny ankizy | Mozika ho an'ny ankizy
Paoma voaendy ho an'ny ankizy - sakafo
mpanoratra famoahana mpiasaNavoaka tamin'ny 14. Desambra 2020 15. Jolay 2021 Sokajy tokantranoKeywords DIY, Ataovy izany, asa-tanana, mpanao asa tanana, Tools, Trangam-pitaovana
indray Lahatsoratra taloha: Fandroana aroma ho an'ny ankizy
more Lahatsoratra manaraka: Sauna Finnish - fahasalamana sy fahasalamana